Posted by တန်ခူး at 11:15 PM
လူတစ်ချို့မှာ ဒီလိုပဲ စရိုက်နှစ်မျိုးရှိတတ်သတဲ့။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့လည်း ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပေါ့နော်။ လူတွေမှာလို့ပဲ ပြောရမလား။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော ဒီလိုသာ ကိုယ်တိုင်ကြုံရမယ်ဆိုရင် မတွေးတတ်အောင်ပါ။
ပြောရရင်တော့ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုပေါ့။ ဒီမှာတော့ အဲလိုကိစ္စတွေအတွက် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းစရာ နေရာတွေ ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒေါသတက်လွယ် ကျလွယ်လူတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဓိကက ဒေါသဖြစ်စေမယ့် ကိစ္စတွေနဲ့ သတိထားရှောင်၊ အာရုံလွှဲ။ Anger Management အကြောင်းတွေ၊ Stress နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတွေကို အင်တာနက်ကနေတဆင့် ရှာဖွေဖတ်ရှုရင် အကျိုးရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
လူ့စိတ်လေ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုသူတွေတောင် ခြောက်ပြစ် မကင်းဘူး။
ဆေးသောက်နေရတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆို ဆရာဝန်ပြပြီး ဆေးအသစ်တစ်မျိုး ပြောင်းသောက်ရတိုင်း "side effect တွေလာတော့မယ်နော်၊ ငါ့ကို ၀ိုင်းထိမ်းကြဦး" လို့ ပြောနေဆိုနေရင်းက ၀ုန်းဒိုင်းကြဲတွေ ဖြစ်ပြန်ရော။ သူ့ဇနီးကို သိလျက်နဲ့ ကိုယ်ချစ်လို့ယူထားတာ ရောဂါပျောက်မဲ့ တစ်နေ့ကို ရည်သန်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး သည်းခံပါလို့ဘဲ အကြံပေးရတော့တယ်။
မတန်ခူးရေ.. တခါတလေလည်း တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေက ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ထက် ပိုဆန်းကြယ်တယ်နော်.. တချို့လည်း အရက်အရမ်းမူးလာပြီဆိုရင် အိမ်ကဇနီးကို ရိုက်နှက်ကြတယ်တဲ့။ မနက်ဆို သူမဟုတ်သလိုပဲ အကောင်းပဲတဲ့.. အဲဒီလိုမျိုးတော့ စာအုပ်တွေထဲ ဖတ်ဖူးတယ်.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ.. ၀ဋ်ကြွေးရှိရင်လည်း အမြန်ဆုံး ကျေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
ကာယကံရှင် တစ်ယောက် ကိုယ်စား ကြောက်လိုက်တာ တန်ခူးရယ်..
အခုတလော.. ဘလော့ဂ်တွေ အတော်များများမှာ ပိုစ့်အသစ်တွေ ဖတ်ရတာ နဲနဲပြင်းထန်လာကြသလိုဘဲ..။
သိပ်နားလည်လွန်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ စိတ်ထဲမှာ ခံစားရတာကို ပြောပြတာပါ..။
အမရာ .. ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်သိတော့ဘူး
ကလေး မရှိဘူးဆိုရင်ကွာ ပစ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ ထင်တယ်နော်..။
ဒေါသ ဖြစ်တိုင်း ပေါက်ကွဲ ထွက်တယ်ဆိုရင် သူ့အသား သူလုပ်ပေါ့..သူ ဆင်ခြင်ပေါ့..။ သူများသားသမီးယူထားပီး ဗလ အားကိုးနဲ့ အနိုင်ကျင်တဲ့သူတွေကို လုံးဝ ရှုံချတယ်..။
အမ.. ခုတလော အရေးစိတ်တယ်နော်..။
ဖတ်လို့ကောင်းတယ်..။ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ ကော်မန့်က မရေးအားတာ..။ မြတ်နိုးရဲ့ ငိုချင်းလေး လာဖတ်ပါလား အမရေ...။
နေကောင်းပါစေ..။ ဒီအပတ်တော့ အမ အညာခေါက်ဆွဲလေးစားမလားလို့ ဟီး.။
နှစ်ယောက်စလုံး သနားစရာပဲနော်။ ယောကျာင်္းက စိတ်ရောဂါဖြစ်နေတာ ထင်ပါတယ်။ စိတ်ဝေဒနာရှင်ကို ကွာရှင်းမပစ်ပဲနဲ့ခွဲနေပြီး အဝေးကနေ တတ်နိုင်သလောက် စောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆို ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ တော့ လုံးဝကို ပြသင့်တာပေါ့ဗျာ။ နှစ်ယောက်စလုံးက အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်ဖို့ လိုတယ်လေ။
အစ်မရေးထားတာ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ။ ဝတ္ထုအဆုံးထိ ဆွဲခေါ်သွားတယ်။
အဲဒီ Domestic violence ကို အမ အမျးကြီးလေ့လာဖူးတယ်။ ခုမတန်ခူးရေးတာမှာ ခွေးကလေးပါ ပါတော့ ဒီအမျိုးသားက စိတ်ရောဂါလို့ ထင်တာပဲ။ မိန်းမကို အနိုင်ကျင့်တာ သက်သက် မဟုတ်တော့ဘူး။ (မတန်ခူးက တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကို ရေးတာဆိုလို့ စဉ်းစားတာပါ)။ တကယ်တော့ မိန်းမလုပ်သူက ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာမျိုး ရဲနဲ့ ဆွေးနွေးတာမျိုး လုပ်သင့်တယ်။ သူ့ကို ဒီတိုင်းပစ်ထားခဲ့ရင် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တောင် ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီသူ့မိန်းမကိုပါ ဒုက္ခပေးမှာ စိုးမိတယ်။ ခုကို ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်း။ အမ တပုဒ်ရေးဖူးသေးတယ်..(တလောက ဘလော့မှာတင်ဖြစ်သေးတယ်.. မမွန်မွန် အိပ်မက်လွင်ပြင်လေ)။ အဲဒါလည်း တကယ့်အဖြစ်ပါပဲ။ ဒါောကာင့် တခုခုဖြေရှင်းရမယ်ထင်တာပါ။
ကိုတားမြစ်ထားသောရေ… ကျေးဇူးပါ…ဆန့် ကျင်ဘက်စရိုက်နှစ်မျိုးဆိုရင် ပိုဆိုးသွားတတ်နော်…
ကိုပေါရေ… ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူး… မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ… ကျွန်မအထင်တော့ ဒေါသအဆင့်ကို ကျော်လွန်တဲ့ စိတ်မကျန်းမာတဲ့ အဆင့်ရောက်သွားတာပါ… အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်နိုင်အောင် တရားထိုင်တဲ့နည်းပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်… အဲဒီအဆင့်မရောက်ရင်တောင် ကိုပေါပြောတာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ ကြားလူတယောက်ယောက်ကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရင်ဖွင့်သင့်တာပေါ့နော်… ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်နဲ့ ပေါ့…
မ ရေ… ဟုတ်ပါတယ်… သိပ်ကို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လူ့ စိတ်ပါ… သူ့ အမျိုးသမီးကတော့ သူနဲ့ ဝေးရာကို တကယ်ကို ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်… တရား ဓမ္မနဲ့ မွေ့ လျော်ပြီး သူ့ ဘ၀က အတော်လေးငြိမ်းချမ်းနေပါတယ်….
နုရေ… မူးလို့ ရမ်းတာလဲ မကောင်းဘူး…ခုလို မမူးပဲ ရမ်းတာလဲ မကောင်းဘူးနော်… သူ့ အမျိုးသမီးက သူ့ ဆီက လွတ်မြောက်ပြီး ၀ဋ်ကြွေးကျေသွားပါပြီ…
သက်ဝေရေ… ဒီလောက်ချစ်တတ်၊ ကြင်နာတတ်တဲ့ ခင်ပွန်းလေးရှိနေတာ ဘာကြောက်စရာလိုလဲ… နောက်postမှာပျော်စရာလေးရေးမယ်နော်…
မြတ်နိုးရေ… ကလေးမရှိလို့ ပဲ ဒီလို ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာထင်တယ်… ကလေးရှိရင် အတော်ဆိုးမယ်နော်… သူက တကယ်ကို စိတ်မကျန်းမာတာပါ…
ကောင်းကင်ကိုရေ… ဟုတ်ပါတယ်… နှစ်ယောက်လုံးသနားစရာပါ… သူ့ အမျိုးသမီးက သူ့ မျက်ကွယ်ကို ထွက်သွားခဲ့ပေမယ့် သူ့ ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အားလုံးကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှ ထွက်သွားခဲ့တာပါ… သူကတော့ ယနေ့ ထက်တိုင် အမှန်တရားကို ရင်မဆိုင်သေးပါဘူး…
မ ရေ… ဟုတ်ပါတယ်… သူ့ က စိတ်ဝေဒနာရှင်ပါ… ခွေးလေးကိုလဲ သေစေတဲ့
ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့ပုံမရပါဘူး… သူလက်လွန်သွားတာပါ… သူ့ မိန်းမဆိုလဲ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့အတော်ချစ်တာ ကျွန်မတို့ မျက်စိရှေ့ ပါ… သူ့ မိန်းမက သူမသိအောင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ခဲ့ဘူးပါတယ်… ဒါပေမယ့် သူက ကုသဖို့အမြဲငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်… ကျွန်မpost အရမ်းရှည်သွားမှာမို့ဇာတ်လမ်းတပုဒ်လုံးမရေးဖြစ်တာပါ… ရဲနဲ့ တော့ မတိုင်ခဲ့ပါဘူး… သူကဘေးလူ အမြင်မှာ တကယ့် ပညာတတ်လူယဉ်ကျေး တယောက်ပါ…
သူ့ မိန်းမက သူတို့ ကို ချက်ပြုတ်ကျွေးနေတဲ့ အဒေါ်လို ရင်းနှီးနေတဲ့ ကရင်မကြီးကို သေချာမှာပြီးမှထွက်သွားခဲ့တာပါ… သူ့ မိန်းမက သူမရှာနိုင်မယ့် တခြားမြို့ ရွာကို ရှောင်ပုန်းပြီး တရား ဓမ္မကို အတော်လေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်… မ ရေ… သူ့ မိန်းမပျောက်ကာစက
သူ့ ကိုကြည့်ရတာ အရူးတပိုင်းပေမယ့် ခုတော့လဲ တော်တော်တည်ငြိမ်သွားတယ်… အဲဒီ ကရင်မကြီးနဲ့ အတူနေတုန်းပဲ… သူရောဂါက သွေးမြင်မှ ပြန်ပြန်ငြိမ်သွားတာ… မ ရဲ့ မမွန်မွန် အိပ်မက်လွင်ပြင်ကို ဖတ်တုန်းက ကျွန်မသူ့ ကို သွားသတိရတယ်… ဒါကြောင့်လဲ မမွန်မွန် တရားရိပ်ကိုသာ စဉ်းစားမိခဲ့ရင် ဒီလိုရင်နာစရာနဲ့အဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးဖြစ်ခဲ့တာပါ… သူ့ အမျိူးသမီးကတော့ တရား ဓမ္မနဲ့မွေ့ လျော်ပြီး အတော်လေးငြိမ်းချမ်းနေပါတယ် မ ရေ… ပါရမီကြောင့်ပဲပြောရမလားမသိဘူး….
အစ်မက စာရေးကောင်းလိုက်တာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြောဖူးသလိုပဲ ၀ိုင်တီယူ ကျောင်းဆင်းတွေက စာရေးဆ၇ာတွေကျနေတာပဲတဲ့ ဒီပို့ စ်လေးဖတ်ရတာ လွန်းထားထား ၀တ္ထုတွေဖတ်ခဲ့ရသလိုပဲ ငယ်ငယ်တုန်းကပြောတာပါ အခုတော့မဖတ်တော့ဘူး :)
The behaviour of the man seems like he is sadist who has sexual pleasure by beating or hurting to bleedapartner ;in this case it'sawife.This kind of abnormal sexual pleasure is called sadism. I am of course not sure ,but it looks that way.
ကျေးဇူးပါမောင်မျိုးရေ… ခုလိုအားပေးတာ နောင်postတွေ အတွက် အင်အားပါ…
Anonymousရေ… ကျွန်မက အဖြစ်အပျက်ကိုပဲ သိပြီး သူစိတ်ဝေဒနာ detail ကိုတော့ မသိပါဘူး… အမျိုးမျိုးတွေးလို့ ရတာပါတယ်…ကျေးဇူးပါ…